शास्त्रले भन्छ सत्ता, शक्ति र समय क्षणिक हुने गर्दछ । मानिस अनेक पृष्ठभूमिबाट शक्तिमा पुग्न चाहन्छ । अनि रम्न चाहन्छ । जब उ शक्तिमा हुन्छ । तब उसले आफ्नो विगत बिर्सँदै सिंहको रूप धारण गर्न हतारिन्छ । ...
अनुदान रकमको नियमन नहुँदा विकृति बढ्यो- गृहमन्त्री थापा
काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेपालमा सञ्चालित सामाजिक संस्थामा आएको अनुदान रकमको नियमन नहुँदा विकृति बढेको बताएका छन् । गृहमन्त्री थापाले नेपालमा दर्ता भएका सामाजिक संस्थाले वार्षिक रु. ५० ...
न्यायालयको सुधारमा लागिपरेको छु- प्रधानन्यायाधीश
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले न्यायको अनुभूति गर्ने आशाको केन्द्रबिन्दु न्यायपालिका भएको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको ४७ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा बिहीबार यहाँ आयोजि...
महाशिवरात्री: डेढ लाख बढीले पशुपतिनाथको दर्शन गरिसके
काठमाडौं । महाशिवरात्रिका अवसरमा पशुपतिनाथ मन्दिरलगायत देशभरका शिवालयमा देवादीदेव महादेवको पूजा आराधना गर्ने भक्तजनको बिहानैदेखि भीड लागेको छ । बिहान ७ बजेसम्म डेढ लाख बढी भक्तजनले पशुपतिनाथ मन्दिरभि...
प्रत्येक वर्ष फागुन कृष्ण चतुर्दशीमा मनाइने महाशिवरात्री पर्व आराध्यदेव भगवान् शिवको पूजा–आराधना गरी मनाइँदैछ । शुक्रबार दिउँसो ५ः४० बजेसम्म त्रयोदशी तिथि छ । त्यसपछि चतुर्दशी प्रारम्भ हुन्छ । चतुर्द...
२६ वैशाख ०७३, राष्ट्रपतिका रूपमा पहिलोपटक विद्या भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा सार्वजनिक गरेकी थिइन् । कार्यक्रममा १३८ बुँदा थिए, जसको १०९औँ बुँदामा उल्लेख थियो– ‘सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी...
यसरी आयो बाँस्कोटाको राजीनामा
सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले घुस लिन कुराकानी गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बिहीबार बिहान आफ्नै निवासमा पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा...
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्ने जिम्मा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पाएका छन् । कमिसन वार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक भएलगत्तै मन्त्री गोकल बाँस्कोटाले राजीनामा दिएपछि सो...
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले राजीनामा दिएका छन् । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका लागि स्वीस एजेन्टसँग ७० करोड कमिसनका लागि कुराकानी भएको अडियो सार्वजनिक भएपछि बास्कोट...
काठमाडौँ । सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरण विवादमा परेसँगै प्रक्रिया अघि नबढाउन सरकारलाई लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ । बिहीबार बसेको समितिको बैठकले समितिको अर्को बैठकले निर्णय नगरेसम्म सेक्युरिटी प्रे...
काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले राष्ट्रिय सभाको बैठक अवरुद्ध गरेको छ । सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको स्वीस कम्पनीसँग ७० देखि ७५ करोड रुपैयाँ कमिसन आउँदा त्यसको ७० प्रतिशत ...
कञ्चनपुर। सुचना तथा सञ्‍चार प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले आफू माथि लागेको आरोप निराधार रहेको बताएका छन । उनले आरोप लाग्नु ठूलो कुरा नभएको बताए । बिहीबार कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिकामा नेपाल ...
काठमाडौँ । समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवम पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आलोचना गरेका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले सेक्युरिटी प्र...
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच आकस्मिक भेटवार्ता भएकाे छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले सेक्युरिटी प्रेस खरिदका लागि ए...
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सञ्चार तथा सुचनामन्त्री गोकुल बास्कोटालाई तत्काल बर्खास्त गर्न माग गरेको छ । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले एक प्रेस विज्ञप्ती निकाल्दै सेक्यु...
सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले ७० करोड घूस मागेको अडियो टेप बाहिरियो
काठमाडौं । सेक्युरिटी प्रेस खरिदका लागि सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले स्वीस कम्पनीका एजेन्टसँग ७० करोड घूस मागेको अडियो टेप बुधबार बेलुका सार्वजनिक भएको छ । स्रोतका अनुसार उक्त अडि...
विकास निर्माणले गति किन लिएन ? समीक्षा गरौँ – मन्त्री पुन
काभ्रेपलाञ्चोक । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले विकास हुन नसकेको कारण खोज्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागद्वारा काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा बुधबार आयोजित १२ औँ...
वडाध्यक्ष स्थानीयसहित आमरण अनशनमा
चितवन । माडीवासीको अति आवश्यक मागप्रति राज्यले ध्यान नदिएको गुनासो गर्दै माडी नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष कृष्णप्रसाद पौडेल सहितले आमरण अनशन शुरु गरेका छन् । वडासदस्यद्वय शिवबहादुर कार्की र अमित लाम...
महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्छ- डा. कोइराला
उदयपुर । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले नेपाली काँग्रेसको आगामी चौधौँ महाधिवेशनले केन्द्रीय नेतृत्व परिवर्तन गर्ने बताएका छन् । नेपाली काँग्रेस जिल्ला कार्यसमिति उदयपुरद्वार...
बाजुरा । बाजुरामा चार दशमलव ३ रेक्टरको भूकम्प गएको छ । जिल्लाको पूर्वी उत्तरी भेगको हिमाली गाउँपालिका र हुम्ला जिल्लाको सिमानामा केन्द्रबिन्दु बनाएर बुधबार राति ९ बजेर १३ मिनेटमा भूकम्प गएको भूकम्प म...